Arsenal oo 35 milyan ginni ku dooneysa badalka Mesut Ozil – Gool FM
Arsene Wenger oo la kulmaya todobaadkan Tababareyaasha xulalka qaranka… (Muxuu kala hadli doonaa?)
“Lukaku waa dammiin, mana ahan qaladka Chelsea” – Paolo Di Canio
Maxay ahayd arrintii uu Macallin Ole Gunnar Solskjær ku qasbay Cristiano Ronaldo kulankii Leicester City?
Xiddig Qowmu-luud ah oo ka ciyaara Premier League oo in la dilo ka baqaya, billaabayna inuu tababar dhanka jirka ah sameeyo!
Icardi oo seegay tababarka PSG, haweeneyda ka dambeysay inay xaaskiisa kala tagaan oo la ogaaday & laacibka oo xaalad taas ka duwan muujinaya
Wakiilka Matthijs de Ligt oo xiriir la sameeyay kooxo ka dhisan England iyo Spain si uu xagaaga dambe uga dhaqaajiyo Juventus
Horudhac: Arsenal vs Crystal Palace… (Muxuu yahay Gunners iyo rikoorkeeda Premier League ee kulammada habeenka Isniinta?)
Arsenal oo 35 milyan ginni ku dooneysa badalka Mesut Ozil
Dajiye January 18, 2019
(Arsenal) 18 Jan 2019. Kooxda Arsenal ayaa dooneysa inay sameyso saxiixa ciyaaryahan cusub, si ay kaga dhigato badalka Mesut Özil.
Mesut Özil ayaa haatan khilaaf xoogan kala dhexeeya tababaraha reer Spain ee kooxda Arsenal Unai Emery, taasoo ka dhigtay in lala xiriiriyo inuu ka tagayo Gunners.
Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Arsenal ay isku diyaarineyso lasoo saxiixashada xidiga reer Mexico iyo kooxda PSV Eindhoven ee Hirving Lozano.
23 jirkan ayaa wuxuu bandhig cajiib ah kasoo sameeyay koobkii aduunka 2018 ee lagu qabtay dalka Russia, isagoo ilaa iyo haatan xili ciyaareedkan u dhaliyay kooxda PSV 15 gool .
Arsenal ayaa isku diyaarineysa inay 35 milyan ginni ku dalbato ciyaaryahanka reer Mexico ee Hirving Lozano inta lagu gudi jiro bishaan Janaayo, iyadoo sidoo kale kooxo badan ee Yurub ah ay doonayaan sameynta saxiixa ciyaaryahankan.
Wargeyska “The Sun” ayaa sidoo kale sheegay in Arsenal ay raacdo ugu jirto xidig ay badal kaga dhigato Mesut Özil, kasoo dhibaato ka heysata in kulamo yar uu ka soo muuqday xili ciyaareedkan qorshaha Unai Emery, sababa la xiriir dhaawacyo uu laacibkan la kulmay iyo sidoo kale khilaaf kala dhexeeya macalinka reer Spain.
Pogba oo raali galin u jeediyay Gianluigi Buffon, kadib markii uu arintan sameeyay
Isku aadka wareega siddeeda kooxood ee Copa del Rey oo la sameeyay --- (Barcelona iyo Sevilla oo isku aaday, kooxdee qoorta loo galiyay Real Madrid?)